” Wax maamula oo ka jira Balad-weyne ma jiro” Gudoomiyaha Balad-weyne Sh Ismaacil Barre Maxamuud. – Radio Daljir
Seteembar 9, 2012 6:03 b 0
Muqdisho, Sep 09- Gudoomiyaha degmada Balad-weyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax maamul dawliya oo ka jira gobolka Hiiraan, isla markaana dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan magaalada Balad-weyne.
Sheekh Ismaaciil Barre Maxamuud oo waraysi siiyay Radio daljir isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in gabi ahaanba uu burburay maamulkii iyo hay?adihii dawliga ahaa ee ka jiray gobolkaasi,taasina ay keentay inuu isaga tago, wuxuuna carabka ku dhuftay inaysan gobolku ku sugnayan hay?adihii maxaliga ahaa iyo kuwii caalamigaa, sidoo kalana dadka shacabkaa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan.
Gudoomiyaha ayaa hadalkiisa ku daray in maamulka hada shaqeeya uu yahay magac-uyaal oo kaliya, wuxuuna xusay in hada magaalada lagu joogo oo kaliya ciidanka dawladda Itoobiya oo kal hore dawladda kumeel gaarkaa ee waqtigeedu dhamaaday la qabtay magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Balad-weyne.
Tan iyo markii magaalada Balad-weyne ay qabsadeen ciidamo is-bahaysanaya oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira oo ay kala wareegeen Alshabaab waxaa soo badanaya eedaymaha iyo muranka dhanka maamulkaa ee u dhexeeyay masuuliyinta gobolka iyo degmada.